आहा ! मुक्तिनाथ !! सुन्दर प्राकृतिक दृश्वालोकनले स्वर्गमा पुगेको आभाष::Nepal's Digital Newspaper
आहा ! मुक्तिनाथ !! सुन्दर प्राकृतिक दृश्वालोकनले स्वर्गमा पुगेको आभाष
मुक्तिनाथ मन्दिर हिन्दू र बौद्ध धर्मालम्वीहरुको प्रशिद्ध तिर्थस्थल । हिमाल पारिको जिल्ला भनेर चिनिने मुस्ताङको काखमा रहेको मुक्तिनाथ समुद्री सतहदेखी ३८ सय मिटर उचाईमा रहेको छ । उचाईमा रहेको हुँदा यसलाई बादल माथिको मन्दिर पनि भन्ने गरिएको छ ।
बाटोमा सुन्दर प्राकृतिक दृश्वालोकन गर्दै मुक्तिनाथ पुग्दा छुट्टै विश्वमा पुगेको आभाष हुन्छ । हुन पनि बाटोका विभिन्न स्थानमा स्वर्ग जाने बाटो भन्दै लखिएका बोर्डहरु पनि भेटिन्छन् । यस मन्दिरमा वर्षेनी लाखौं स्वदेशी तथा विदेशीहरु पर्यटक पुग्ने गरेका छन् ।
विश्वकै प्रशिद्ध पदमार्ग ‘अन्नपूर्ण सक्रिट’मा पर्ने मुक्तिनाथ ट्रेकिङका लागि पनि उत्तम मानिन्छ । प्रकृतिमा रमाउने पर्यटकहरु ट्रेकिङ गर्दै मुक्तिनाथ पुग्ने गर्छन् । सडकका कारण ट्रेकिङ रुट भने ओझेलमा परेको छ । केहि स्थानमा सडक निर्माणको क्रममा सो रुट मासिएका पनि छन् । यसैले होला सडक मार्गको प्रयोग गरेर पनि पर्यटकहरु मुक्तिनाथ पुगेर फर्किने गर्छन् । पोखराबाट हिँडेको ७ देखि १० दिनमा मुक्तिनाथ पुगेर फर्किन सकिन्छ ।
काठमाडौंबाट सार्वजनिक बस वा आफ्नै गाडीमा पोखरा, बेनी हुँदै तातो पानीसम्म पुग्न सकिन्छ । धार्मिक हिसावले मुक्तिनाथ जानेहरु तातोपानीमा नुहाएर जाँदा उत्तम मानिन्छ । यहाँको तातो पानीमा नुहाउँदा छाला, वाथ र ग्याष्ट्रिक निको हुने विश्वास गरिन्छ । धार्मिक हिसावले समेत यो प्रशिद्ध मानिन्छ ।
तातोपानीबाट मुक्तिनाथ जाँदा बाटोमा रुप्से झरना देखा पर्छ । त्यो झरना निकै सुन्दर देखिन्छ । रुप्से झरना कालिगण्डकीमा मिसिएको ठाउँ विश्वकै गहिरो खोँचमध्येमा पर्छ ।
यसपछि घाँसा हुँदै मार्फा गाउँ पुगिन्छ । मार्फा नेपालकै सबैभन्दा बढी स्याउ उत्पादन हुने ठाउँ पनि हो । यहाँ खान बस्नका लागि सामान्य होटलदेखि स्तरीय लजहरु समेत रहेका छन् ।
मार्फाबाट जोमसोम पुगिन्छ । जोमसोमबाट पोखरा वा पोखराबाट जोमसोमका लागि जहाजको सुविधा पनि रहेको छ । जोमसोम आफैमा निकै सुन्दर ठाउँ हो । जोमसोमबाट निलगिरी र धौलागिरी हिमाल अवलोकन गर्न पाइन्छ ।
जोमसोमबाट कागवेनी पुगिन्छ । कागवेनी धार्मिक रुपमा महत्वपूर्ण ठाउँ हो । यहाँ सोह्र श्राद्ध गर्न जानेहरु धेरै हुन्छन् । कालिगण्डकी किनारमा रहेको कागवेनीमा स्वदेशी विदेशी पर्यटक मज्जाले रमाउन सक्छन् ।
कागवेनीबाट मुक्तिनाथ मन्दिरमा पुग्न सकिन्छ । यहाँ पुग्दा छुट्टै विश्वमा पुगेको अनुभूति हुन्छ । अन्नपूर्ण सक्रिटमा थोरङ्ला क्रस गरेपछि बस्ने ठाउँ भनेको मुक्तिनाथ मन्दिरमा हो । मुक्तिनाथ मन्दिर चार धाममध्ये एकमा पर्छ । हिन्दू र वौद्ध धर्मको उत्कृष्ट सहिष्णुता भएको मुक्तिनाथ विश्वमै प्रशिद्ध मानिन्छ । मुक्तिनाथमा खान बस्नका लागि राम्रो सुविधा रहेको छ ।
अन्नपूर्ण र धौलागिरीको बिचमा पर्ने विश्वकै गहिरो खोँच कालीगण्डकीको किनारै किनार घाँसा, मार्फा जोमसोम, कागवेनी हुँदै मुक्तिनाथ पुगिन्छ । यात्राको क्रममा हिमाली दृश्यहरु, सुन्दर गाउँहरु, रुख र घाँस नभएका पहाडहरु देख्दा जो कोहिको मनै फुरुङ्ग हुन्छ ।
हामीसँग लामो समय भएमा यात्रा लम्बाउन सकिन्छ । पोखराबाट घोरेपानी हुँदै तातोपानी मार्फा भएर पनि मुक्तिनाथ पुग्न सकिन्छ । पुनहिल डाँडाबाट हिमाली दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । यहाँबाट निलगिरी, धौलागिरी र अन्नपूर्ण हिमश्रृङ्खला देख्न सकिन्छ ।
तस्बिर : विपिन मल्ल/नागरिकपाटी